သင်၏သစ္စာရှိမှုသည်အဘယ်မှာနည်း။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2011 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 1, 2011 Douglas Karr
သစ္စာရှိမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည် တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်သစ္စာရှိခြင်း၏အရည်အသွေး။ မင်းသတိထားမိလား ဘယ်လို သစ္စာရှိမှု, သို့သော်ဆွေးနွေးတင်ပြသလဲ ကျနော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို ဖောက်သည်များ ဘယ်လိုသစ္စာရှိပါသလဲ န်ထမ်း ဘယ်လိုသစ္စာရှိပါသလဲ clients များ ဘယ်လိုသစ္စာရှိပါသလဲ မဲဆန္ဒရှင်တွေ သစ္စာရှိတယ်…
အလုပ်ရှင်များအကြောင်းပြောဆိုပါ ဝန်ထမ်းသစ္စာရှိမှုပြီးတော့သူတို့ဟာပြင်ပကိုငှားရမ်းတယ်၊ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကိုမဖွံ့ဖြိုးဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှု အောက်ခြေလိုင်းသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ကိုသာလော။
နိုင်ငံရေးသမားများမျှော်လင့်ကြသည် မဲဆန္ဒရှင်သစ္စာရှိမှုဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မဲပေးရမယ့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးဘယ်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုမလဲဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှု သူတို့ရဲ့ပါတီမဲဆန္ဒနယ်ထက်သာ။ ကြီးမြတ်သူတို့ရဲ့ပါတီမှ?
ကုမ္ပဏီများအကြောင်းပြောကြသည် ဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုသို့သော်သူတို့သည်အသစ်ဝယ်ယူထားသောဖောက်သည်များကိုရှိပြီးသားများထက်ပိုမိုအာရုံစိုက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသဘောတူညီမှုကိုပေးသည်။ ဘယ်မှာလဲ သူတို့၏ ရှိပြီးသားဖောက်သည်များအပေါ်သစ္စာရှိမှု? ဗီဒီယိုမှကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် မဟာမိတ်ဘဏ် ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှုကိုကြည့်ရတာရယ်စရာပါ
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှသစ္စာရှိမှုအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုဖောက်သည်များသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများက၎င်းတို့အပေါ်မည်မျှသစ္စာရှိကြောင်းကိုသူတို့ပြောနေကြသည် ဘာကြောင့်အဲဒီလိုအလုပ်လုပ်ရတာလဲ ငါလုပ်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူး
သစ္စာရှိမှုကကျွန်တော့်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်သောအခါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်လက်ကိုလှုပ်လိုက်သောအခါမည်သည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်လက်မှတ်ထက်မဆိုကျွန်ုပ် ပို၍ တန်ဖိုးထားသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုလက်ဝယ်ထားရှိပါကရောင်းချသူသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝလည်ချောင်းနာစွာခံရသည်။ သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။ ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှစီးပွားရေးကိစ္စဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူး။
တစ်ခုတည်း clients များ သစ္စာရှိမှုဆိုတာငါတို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မကြာခဏဆိုသလိုအခကြေးငွေများလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်လိုသောကုမ္ပဏီများအတွက်ကွင်းဆက်များကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုအတွက်စျေးလျှော့ပေးသော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိသောကုမ္ပဏီများအားအရင်းအမြစ်များကိုရက်ရောစွာလှူဒါန်းသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ခြေထောက်ပေါ်တက်သွားတဲ့အခါငါမျှော်လင့်တာကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သူတို့ကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မယ်။ အမှန်တရားကတော့ကျနော်တို့မကြာခဏမမြင်မိပါဘူး သစ္စာရှိမှုသေပြီဟုထင်ရသည်။
အကယ်၍ သုံးစွဲသူတစ် ဦး က၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားရလဒ်ကောင်းများရရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းစွာပေးဆပ်နေလျှင် - ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်မမျှော်လင့်ပါ သစ္စာရှိမှု ကျနော်တို့သဘောတူညီချက်၏အဆုံးကိုတက်ကိုင်ခဲ့ပါဘူးကတည်းကကြောင်း client ကိုမှ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာသစ္စာစောင့်သိမှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လူအများစုကချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အိတ်ထဲကိုပိုက်ဆံထပ်မံထည့်ပြီး ၀ မ်းသာစွာနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကဒီဥပမာရဲ့ခိုင်မာသောနမူနာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်သောကြောင့်အမြတ်အစွန်းနှင့်ကမ်းလွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။
သင်၏ရောင်းချသူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များအားတူညီသောသစ္စာရှိမှုရှိပါသလား။